जिब्रो सफा राख्न अपनाउनुस् यी सजिको तरिका - ज्ञानविज्ञान
जिब्रो सफा राख्न अपनाउनुस् यी सजिको तरिका
हामी दिनहुँ दाँत माझ्छौँ । जिब्रोको सफाइमा भने उति ध्यान पु¥याइरहेका हुँदैनौँ । जिब्रोमा जम्मा हुने सेतो पत्रले सास गनाउने समस्या उत्पन्न गराउँछ । साथै, स्वाद थाहा पाउन, शुद्धसँग उच्चारण गर्नसमेत यसको सफाइमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।
जिब्रो लाइ सफा राख्न अपनाउनुस् यी तरिका
बजारमा धातु र प्लास्टिकको टङ क्लिनर पाइन्छ । ब्रस गरिसकेपछि टङ क्लिनरले बिस्तारै जिब्रो सफा गर्नुपर्छ ।
जिब्रोमा जमेको सेतो पत्र र ब्याक्टेरिया हटाउन नुन ज्यादै उपयोगी हुन्छ । किनकि, नुनमा एन्टिसेप्टिक गुण हुन्छ । जिब्रोमा अलिकति नुन छरेर टुथब्रसले केही बेर रगड्ने । सातामा दुई पटक यसो गरे जिब्रो ब्याक्टेरियारहित हुन्छ ।
मनतातो पानीमा नुन हालेर सातामा दुई पटक कुल्ला र गार्गल गर्नाले जिब्रो सफा हुनुको साथै यसमा जम्मा भएका ब्याक्टेरिया पनि हटेर जान्छन् ।
खानासँग दही खाँदा क्यान्डिडा फंगसका कारण जिब्रोमा जमेको सेतो पत्र हट्छ र जिब्रोसँगै श्वास पनि शुद्ध हुन्छ ।
बिहान ब्रस गर्नुअघि नरिवलको तेल मुखमा हालेर केही समयसम्म कुल्ला गर्नुपर्छ । त्यसपछि मनतातो पानीले कुल्ला गर्नुपर्छ । हरेक दिन बिहान गरियो भने जिब्रो सफा हुन्छ र श्वास गनाउने समस्या पनि हटेर जान्छ ।
घ्यूकुमारीको जुसमा जिब्रो र मुखमा रहेका ब्याक्टेरिया हटाउने गुण हुन्छ । एक चम्चा एलोबेरा जुस मुखमा केही बेर राख्ने । कुल्ला गरी यसलाई थुकिदिने । अथवा एक चम्चा एलोबेरा जुस पिउने गर्नुपर्छ ।
बेसारमा पनि ब्याक्टेरियानाशक तत्व हुन्छ । त्यसैले जिब्रो सफा गर्न यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । आधा चम्चा बेसारमा कागतीको रस मिलाएर पेस्ट तयार पार्ने । यो पेस्ट केही बेर जिब्रोमा रगडेपछि कुल्ला गर्ने । साथै, आधा चम्चा बेसारलाई पानीमा घोलेर गार्गल गर्नाले पनि जिब्रो सफा हुन्छ ।
मुखको सफाइका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुरा पनि जानी राख्नुहोस |
धेरै गुलियो, अमिलो खानेकुरा सकेसम्म कम खाने ।
धेरै तातो र धेरै चिसो नखाने ।
मादक पदार्थ, धूम्रपान र सुर्ती सेवन नगर्ने ।
हतारमा, जोडसँग घोटेर दाँत नमाझ्ने ।
मुखमा खानेकुरा राखेर नसुत्ने ।
बच्चाको मुखमा दूधको बोतल राखेर नसुताउने ।
बिहान खाना खाएपछि र राति सुत्नुअघि दाँत माझ्ने ।
रेसा भएको र पोसिलो खानेकुरा खाने ।
पानी प्रशस्त पिउने ।
वेलावेलामा मुख कुल्ला गरेर दाँतमा अड्किएका खानेकुरा हटाउने, डेन्टल फ्लसको प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ ।
नरम ब्रसले दाँत माझ्ने, जिब्रो पनि सफा गर्ने ।
Don't Miss it दाँत किन हुन्छ पहेँलो र कालो हुन्छ ? ब्रस नगर्दा स्वास्थ्यमा हुने खतराहरु र दाँत तथा स्वस्थ गिँजा राख्ने उपायहरू
Up Next यी उपाय अपनाएर स्वस्थ रहनुस्
कुन कुन खानेकुरा फेरि तताएर खानु हुदैन
धेरै मानिसको खाने कुरा सेलाको खानु भन्दा पनि फेरी तताएर खानु राम्रो सन्झिन्छन् । तर हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्छ कुन कुन…
यसकारण नियमीत नङमा ‘पोलीस’ नगर्नुहोस्
महिलाले आफ्नो नङ राम्रो देखिनको लागि नङ पोलीस अनिवार्य हुन्छ । यस्ता छन् नियमित नेलपोलिस गर्दाका हानिः -फरक/फरक रङ लगाउनका लागि मानिसले…
गर्भावस्थाको फाइदा यस्तो छ
शिशु जन्मिएपछि सकारात्मक प्रभाव -अधिकांश महिलाहरुले पहिलो बच्चाको जन्मपछि उनीहरुको मासिकस्रावसँग जोडिएका समस्याहरु निकै कम भएको महसुस गर्छन् । -प्रसवपछि…
यसो गरेको खण्डमा नराम्रा सपनाको दोष काटिन्छ
१. भगवान बिष्णुको निम्न आठ नामहरु बिहानको नित्यकर्म सकेर पुर्वतर्फ फर्केर भक्तिपूर्वक स्मरण गरे खराब सपनाको प्रभाव नष्ट हुन्छ। अच्युतं,…
कोलेस्टेरोल के हो ? समाधानको उपाय के हो ?
कोलेस्टेरोल शरीरका प्रत्येक कोषहरूमा पाइने नरम चिल्लो पदार्थ हो |यसको उत्पादन प्रमुखरूपमा कलेजोमा हुन्छ। रगतमा आवश्यकभन्दा बढी कोलेस्टेरोलको मात्रा भए…
अहिले धेरैजसो मानिसलाई दादले सताएको देखिन्छ, यसबाट जोगिने उपाय जान्नका लागि एकपटक हेर्नुहोला
धेरैले आफ्नो छालामा चिलाउने ‘दाद’ आएको भन्छन् । त्यसलाई दाद भनिए पनि त्यो ‘फंगल इन्फेक्सन’ अर्थात् छालामा ढुसी पर्नु हो…